We Fight We Win. -- " More than Media ": ချစ်သော မဟာ ပထ၀ီ မြေ
ချစ်သော မဟာ ပထ၀ီ မြေ
Land Grabbing by the Myanmar Military : Theme, Root Cause and Solution by Moethee Zun
by Moethee Zun (Notes) on Saturday, March 16, 2013 at 12:33am
''' ချစ်သော မဟာ ပထ၀ီမြေ''
လက်ပံတောင်းတောင်လယ်သမားအရေးတော်ပုံ ရဲ့မြေယာဒသန၊ ပြသနာနှင့်အဖြေများ
မြေယာဒသန ( Theme)
ဒီမိုကရေစီကိုလိုခြင်တယ်ဆိုရင် မြေတွေအားလုံးကိုနိင်ငံတော်က သာပိုင်ရယ်ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ခေါင်းထဲက အရင်ထုတ်ရမယ်။ အိမ်မြေ၊ လယ် မြေတွေ၊ ယာတွေ မြေတွေကို ပြည်သူပိုင်ရမယ်။ နိင်ငံတော်လုံးဝ မပိုင်စေရ။
သမ္မကျမ်းစာထဲမှာလူက မြေကြီးကလာတယ်။ မြေကြီးကို ပြန်သွားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မြေကြီးဟာလူသားရဲ့ဘ၀မှာ ကြီးမားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတရပ်အနေနဲ့ ကိန်းဝပ်နေတာကို ကျမ်းစာကပြောတာပါ။ လူအပါအ၀င်သတ္တ၀ါတွေအားလုံးဟာ ဇာတိကို ချစ်ခင်ကြတယ်။ အစွဲလမ်းကြီးတယ်။ ရေဘယ်လောက်ကြီးကြီး ရေကျသွားတာနဲ့ ငခူတကောင်ဟာ သူနေထိုင်ရာ ကြွင်းကို
ပြန်လည်ခိုလှုံ ပါတယ်။ တောထဲကဂျီတကောင်ဟာ သူနေထိုင်ရာခြုံပုတ်ကိုအလုံခြုံဆုံးလိုယူဆတယ်။ လူသားဟာ ကိုယ်မွေးတဲ့ဇာတိမြေကိုစွဲလန်း တယ်။ မေ့ လို့ မရတဲ့ဇာတိမြေ။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့မြို့ကြီးကိုပဲရောက်ရောက်၊တခြားနိင်ငံကို ပဲရောက်ရောက် စုတ်ပြတ်နေ တဲ့ ကိုယ်မွေးရပ်မြေကို အပြင်းထန် သတိရလေ့၇ှိကြတယ်။ သတ္တ၀ါ နဲ့ မူလ စိတ်ဓါတ်တွေကိုဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကို ဘယ်သူပြောင်းနိင်သလဲ။ ဘယ်သူမှမပြောင်းနိင်ပေဘူး။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းဟာ မြေကြီးသမိုင်းလို့ ပြောလို့ တယ်။
မြေ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲကြတယ်။ ဥရောပ နပိုလီယံ ခေတ် စစ်ပွဲ တွေက အစ မြန်မာ့ သမိုင်းရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ စစ်ပွဲတွေအားလုံးဟာ မြေကြီးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားတဲ့ အစ္စရေး၊ပါလက်စတိုင်း ပဋိပက္ခဟာ လဲ မြေအတွက် အသက် သွေးတွေ ပေးဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးကာလမှာ ဂန္ဒီကို သူတော်စင်တယောက်လို ပဲ အိန္̔ဒိယနိင်ငံသားတွေကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။သူစကားကိုမြေ၀ယ်မကျနားထောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေ ကြီး နဲ့ပတ်သက်လာတော့ အိန္̔ဒိယ ညီအကိုချင်း ( ဟင်ဒီနဲ့ မူစလင်) တွေဟာ သူတို့ ဖခင်စကားကို ငြင်းပယ်လိုက်ကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမြေပုံမှာ အိနယနဲ့ပါကစတန် နစ်နိင်ငံဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂန္ဒီကို မချစ်လို့ မဟုတ်။ မြေကြီး ကို လူသား က အရာခတ်သိမ်း ထက်ပို ချစ်တယ်။ ဒီအတွက် လိုအပ်ရင် အရာရာကိုစွန်လွတ်တတ် တဲ့ သဘာဝ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကပြည်သူတွေက ဒေါ်စုကိုချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ တို့ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးက မြေကြီးရှိမှာဖြစ်မယ်။
သူတို့ ဒေါ်စုကိုမဲပေးနိင်ပေမဲ့မြေကြီးကိုတော့အလွယ်တကူပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြေကြီးကိုပေးလိုက်လို့ ကျနော်တုို့ နားမချသင့်ပါဘူး။
တခါးဖွင့်စီးပွားရေးစနစ်ကို အေင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်လယ်ယာမြေတွေကို စီမံကိန်းတွေအကြောင်းပြပြီး လယ်မြေတွေကိုသိမ်းယူတာကိုရပ်ဆိုင်းပြစ်ရမယ်။ လယ်ယာမြေတွေကို လယ်သမားတွေကို ပြန်ပေးရမယ်။ တရားအမှန်၊နိဗ္ဗာန်လမ်းအစစ်၊ ပြည်သူပေါ်လစီက လယ်မြေ၊ယာမြေ၊ အိမ်မြေ နိင်ငံသားတွေပဲပိုင်ရမယ်။ တဦးချင်းပိုင်ဆိုင်ရမယ်။
အစိုးရက လုိုခြင်ရင်၊ ကုမ္ပဏီက လိုခြင်ရင် သင့်ရာဈေးနဲ့ ဝယ်နိင်တယ်။ ရောင်းနိင်တယ်။သင့်မြေကြီးမှာ ရွှေထွက်ရင်သင်ပဲပိုင်ရမယ်။ နိင်ငံတော်မပိုင်စေရ။ သင့်မြေကြီးမှာ သဘာဝဓါတ်ငွေထွက်ရင် သင်ပဲပုိုင်ရမယ် နိင်ငံတော်မပိုင်စေရ။ နိင်ငံတော်က လိုခြင်ရင် သင်ဆီက ၀ယ်ရမယ်။ ကုမ္ပဏီကလိုခြင်ရင် သင့်ဆီက၀ယ်ရမယ်။
ဒီအမြင်ဟာ အနောက်တိုင်းမှာရော၊ ကျနော်တို့ရှေး ကဘုိုးဘွားဘီဘင်လက်ထက်မှာ ရော ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပေါ်လစီဖြစ်တယ်။
ကျနော်နေခဲ့ဘူးတဲ့ထိုင်းမှာရော ၊အမေရိကန်မှာရော ဂျပန်မှာပါ ဒီပေါ်လစီကိုကျင့်သုံးတယ်။
လမ်းဖေါက်မယ်။ အစိုးရက စီမံကိန်း လုပ်မယ်ဆိုရင်ရင် လိုခြင်တဲ့မြေကို
၀ယ်ရတာပဲ။ လျောကြေးပေးရတာပဲ။ လျောကြေး က ပေါက်ဈေးထက်ကို
မျိုးမျိုးမြက်မြက်ရကြလေ့ရှိတယ်။ မြေပိုင်ထားတဲ့ဆင်းရဲသားတွေက တသက် ချမ်းသာသွားခွင့်ရသွားကြတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပေါက်ဈေးထက်ကို ၂ ဆ ၃ ဆ တင်ရောင်းနိင်ခဲ့ကြတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကောင်မှာ ဂျပန်သံရုံးအနီးမှာမိုးမျော်တိုက်တွေဆောက်လာပေမဲ့ အလယ်ကောင်တည့်တည့် မှာ သာမန် သစ်သားအိမ်လေးတလုံး ရေချမ်းစင်လေးနဲ့ကရှိတုန်းပါ။ မူလအိမ်ပိုင်ရှင်က ဖယ်မပေးပါဘူး။ ထိုင်းအစုိုးရကလဲ အဓမမဖယ်ရှားရဲ ပါဘူး။
ဂျပန်တိုကျိုမြို့မှာလမ်းတွေတိုးချဲ့ ဖေါက်တုံးက လမ်းနဲ့မလွတ်တဲ့အိမ်တွေကို အစိုးရဖယ်ရပါတယ်။ ပေါက်ဈေးထက်ပိုပေးခဲ့ရပါတယ်။
ကျန်ာနေတဲ့နယူးယောက်မြို့ ကွင်း ကောင်တီ ( Queens) နဲ့ ဘရုခ်ကလင်( Brooklyn) ကို ဆက်သွယ်ဖို့အဝေးပြေးလမ်းမတို တခုဖေါက်ဖို့ မြို့ ကောင်စီက စဉ်းစားလာတယ်။ ရှေးဟောင်းသင်္ဂျိုင်း တခုက မလွတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ ပိုင်ရှင်တွေကို လျောကြေးအကြီးအကျယ်ပေးပြီး အုတ်ဂူတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာတွေမှာလဲဒီပေါ်လစီကိုရှေးဘုရင်တွေလက်ထက်ကတည်းက ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ ကျနော်တုို့ မြန်မာ့ရိုးရာပုံပြင်တခုမှာ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးဟာ
တန်းခိုးကြီးတယ်။ သူက ခုခေတ် စစ်အုပ်စုတွေထက် ခေတ်မှီတဲ့အမြင်ရှိတဲ့
ဘုရင်ကြီးလို့ ပြောလုို့ ရတယ်။ ဘာဖြစ်လုို့ လဲဆိုတော့ ခုခေတ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလို သဘ၀သယံဇတ ကိုရောင်းချ ပြီး ရပ်တည်နေတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ နိင်ငံတော်ဝင်ငွေက အခွန် ( Tax) နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ အလွန် မျော်အမြင်ရှိတဲ့ ဘုရင်လုို့ ပြောလို့ ရတယ်။ အခုခေတ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုလို့နိင်ငံတောက်ု အခွန် နဲ့လည်ပတ်ထားနိင်တယ်။ အခွန်ကောက်တဲ့နည်းကတော့သူရဲ့လှံပျံကိုစေလွှတ်လိုက်တယ်။ အခွန်မပေးတဲ့သူကိုလှံကချိန်ထားတယ်။ အခွန်ပေးလိုက်မှာ လှံက ပြန်လာတယ်ပေါ့။ အဓိပါယ်ကတရားဥပဒေကဲသို့သော လှံနဲ့ အရေးယူတယ်ဆိုတာပါ။
တနေ့ တော့သူက မုဆိုးမတယောက်ဆီက မြေတကွက်ကို လျောကြေးမပေးပဲ သ်ိမ်းလိုက်မိတယ်။ ဒီအခါ သူရဲ့ တန်းခိုးရှိတဲ့လှံဟာ စေလွတ်လို မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအခါမှာ ဘုရင်ကြီးဟာ သံဝေဂရတယ်။ မြေကွက်ကို မုဆိုးမ
ကို ပြန်ပေးတော့မှာ သူဟာ အရင်လုို တန်ခိုးပြန်ရတယ်။ လှံပျံကိုစေလွတ်လို့ ရလာတယ်။
ဒီပုံပြင်ဟာ နောင်လာနောင်သားတွေကို သခန်းစာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့မြေကို အာဏာပိုင်တွေသိမ်းခြင်တိုင်းသိမ်းလို့ မရဘူးလို့ 
အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ဘုရင်ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘိုးတော်ဘုရားက သူလယ်မြေတွေကိုတိုးချဲ့ တယ်။ ဒီအခါမှာ အနီးနားက လယ်တချိုပါသွားတယ်။ လက်မသားတဦးရဲ့မြေကွက်ပါသွားတယ်။
မြေတကွက်ကို လယ်သမားဆီကနေ သိမ်းယူခဲ့တယ်။ ဒီတော့ လယ်သမားကအမတ်ဦးပေါ်ဦးကိုတိုင်တယ်။ ဦးပေါ်ဦးကဖြေရှင်းပေးတယ်။ ဘုရင်ဟာ လာရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ အမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဘုရင်အမှုရှုံးတယ်။ လယ်ကိုပြန်ပေးရတယ်။ လျောကြေးပေးခဲ့ရပါတယ်။
( ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးဟာ ခုခေတ်လိုမဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်မှု ရှိခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးတွေရှိခဲ့တယ်။ ဥပမာ လူတယောက်က သူရဲ့ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာကိုယုံကြည်ရင် သူကိုယ်သူ တရားသူကြီးအဖြစ်နဲ့ကြေညာနိင်တယ်။ သူဆုံးဖြတ်တာကို တရားတယ်လို့ ယူဆရင် အမှု ဖြစ်သူတွေက လာရောက်အမှုရင်ဆိုင်နိင်တယ်။ သူဆုံးဖြတ်ချက်ကို တရားလိုတရားခံက ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် နိင်ငံတော်ကအတည်ပြုပေးပါတယ်။ သူရဲ့တရားရုံးကို ခုံ လို မြန်မာလိုခေါ်တယ်။ ဒီလို ပုဂလိက တရားရုံးတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက မကောင်းဘူးဆိုရင် အမှုမအပ်ကြဘူးပေါ့။ ဒီတရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုကြည့်ရင်ခုခေတ်ထက်သိပ်ကိုအဆင့်အတန်းမြင့်တာကိုတွေ့ ရလိမ့်မယ်။ ခုံတော်မောင်ကျဘန်းဆိုတာ ဘုရင်ခံထားတဲ့ တရားသူကြီးမဟုတ်ပါ။ ပြည်သူတွေက သူဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အဂတိတရားကင်းတယ်လို့ ယူဆကြလို့ သူဟာ ခုံတော်မောင်ကျဘမ်းရယ်လို့သမိုင်းမှာနာမည်တွင်ခဲ့တာပေါ့။ တရုပ်ရုပ်ရှင်ကားတခုဖြစ်တဲ့ ကျန်ကျောင်းလိုပေါ့။ )
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာမှာ ဒီစီမံကိန်းဟာ တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိနိင်တယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်စုကောက်ချက်ကို အံသြမိတယ်။
သူနားမှာ စနစ်တကျ သုတေသန တွေအချက်အလက်တွေ ရှာဖွေပြုစုပေးနိင်တဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးလုို့ ယူဆပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် မြေသိမ်းမှုဟာ နိင်ငံရေး ကျင့်ဝတ်အရ၊ သဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်ရှု့ တောင့်အရ၊ စီးပွားရေးရှု့ တောင့်အရ
အစိုးရအဆက်ဆက်မှားယွင်းမှုကြီးသာဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျနော်တုို့ လက်ခံလုို့ မရပါဘူး။ ဒေါ်စုချစ်တာ၊ ထောက်ခံတာ နဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားဆင်ခြင်မှု က သီးခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ပံတောင်း ပြသနာဟာ တပြည်လုံးပြသနာကို ကိုယ်စားပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်ဟာ လယ်သမား ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ နိင်ငံတော် ဂျီဒီပီရဲ့၅၄ ရာခိုင်နှုန်းက
လယ်ယာမြေက၀င်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ပတောင်းတောင် ကလယ်သမားတွေဟာ ခရိုနီဖြစ်ချင်လို့ ၊ အမတ်လုပ်ခြင်လုို
တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တောင်းဆိုနေတာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မြေတွေကို သိမ်းယူတာဟာ ဘ၀တွေကိုသိမ်းယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေရှိမှအသက်ရှင်ရပ်တည်နိင်တဲ့ဘ၀မှာမြေမရှိတော့တဲ့
ဘ၀တွေဟာ သေဆုံးတာပဲဖြစ်တယ်။ ၁၉ ၉ ၀ က သူတို့ ဟာဒေါ်စု ပါတီကို မဲပေးခဲ့ မှာ တာသေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ မြေတော့ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူး။ လျောကြေးတွေကြောင့် လယ်သမားတွေ ဘ၀ တိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာထက်
ဘ၀ပျက်သွား တဲ့ ဇတ်လမ်းတွေ အချက်အလက်တွေက ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း အတွေ့ အကြေုံတွေပဲ ကျနော်တို့ ကြားနေရပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနိင်ငံတွေမှာပဲ ကျေနပ်မှု တစုံတရာရှိခဲ့ပေမဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုရေး အကျိုးဆက်တွေက ရှင်းမရနိင်ခဲ့သေးပါဘူး။
လယ်သမားအနေနဲ့မြေတွေသိမ်းတာကိုလက်ခံလိုက်ပါဆိုတာကိုတော့ အလောင်စည်သူမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘိုးတော်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါ်စုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောလဲ လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပြသနာက ကျင့်ဝတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေတာပါ။ ဥပမာ- မယားကို သူများ သိမ်းသွားတာကို လင် ကို လက်ခံလုိုက်ပါလို့ နားချဖို့ မသင့်သလိုပါပဲ။ အလုပ်သမားတယောက်ကိုလုပ်ခလျော့ယူဖို့ နားချသလိုပါပဲ။ ဒါက ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တွေ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စ၊ မပြောသင့်တဲ့ကိစ္စလို့ မြင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးသန်းရွှေခေတ်က လယ်တွေသိမ်းသွားတာကို သူတို့ မပြောနိင်ခဲ့ပါဘူး။
ပြောလာနိင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ ပြောလာကြမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကိုလယ်သမားတွေကို အမြော်မြင်နည်းသူတွေ၊ ပညာမဲ့သူတွေလို့ယိုးစွပ်သူဟာ ကိုယ်တိုင် အိမ်မြေ၊ယာတွေ သိမ်းတာကိုမခံ စားဘူးသေးတဲ့ သူတွေသာဖြစ်ပါမယ်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်နဲ့စစ်အုပ်စုခေတ်
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က မြေမဲ့ယာမဲ့ ၂၀ ရာခုိုင်နှုနှုန်း ရှိခဲ့တယ်။ အခုဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ခတ်မှာမြေမဲ့ ယာမဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုရှိလာတယ်။ ဒါဟာ လူမှုရေး ပေါက်ကွဲမှုကိုဦးတည်လာနေပါတယ်။ လက်ပတောင်းတောင်လယ်မြေအသ်ိမ်းခံရမှုဟာ တပြည်လုံးမှာဖြစ်နေတဲ့လယ်ယာမြေပြသနာတွေကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ ကျန်ာတုို့ မြန်မာပြည်ကိုသွားခဲ့ကတည်းက
ေုမြယာပြသနာနဲ့ပတ်သက်လုို့ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းနဲ့ကျနော်တုို့ အကြံပြုဆွေးနွေးပြခဲ့ပါတယ်။ မြေယာတွေကို ပြန်ပေးဖို့၊ မြေယာဝေချမ်းရေးတွေလုပ်ဖုို့ ပါ။ န်ိင်ငံတော် နံမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ခရိုနီပေါင်းစုံရဲ့မြေသိမ်းယာသိမ်း လုပ်ရပ်တွေကို ကျနော်တုို့ လက်မခံပါ။
ကျနော် တို့ ခေတ် တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်အုပ်ချုပ်ထူထောင်ကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တုို့မှာ အရင်း ( Capital) ဘာတွေရှိမလဲ လို့ကျနော်အလေးနက်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် ကျနော်တို့ မှာ ၂ ချက်ပဲရှိတာကို တွေ့ ရတယ်။
အဖြေ ( Solution )
နှစ်။ ပညာ ရေး သာလျင်ဖြစ်တယ်။
ကျန်တာဘာမှမရှိပါ။ ( ဒီနှစ်ခုမှာလဲ မြေကလူထုထဲမှာမရှိပါ။ ပညာရေးကလဲ အဟောသိကံဖြစ်နေပါတယ်။)
မြန်မာ ပြည်ဟာ စက်မှု မတည်ဆောက်နိင်သေးတဲ့အတွက် စီးပွားရေးဟာ
လယ်ယာမြေကို အမှီပြုနေရဦးမှာဖြစ်တယ်။ လယ်ယာမြေ လူအဖွဲ့ စည်းမှာပဲ
ကျနော်တို့ ကျေနပ်နေလို့ မရပါ။ အချိန်ဆွဲနေလို့ မရပါ ။ စက်မှုလူအဖွဲ့ စည်းအဖြစ်သို့ အမြန်ဆုံးကူးပြောင်းနိင်ရမှာဖြစ်တယ်။ အမြန်ဆုံးကူးပြေုာင်နိင်ဖုို့ တခုတည်းသော စွမ်အား ( Driving Force ) ကတော့လယ်ယာမြေဝေချမ်းရေးပဲဖြစ်တယ်။
လယ်တွေကိုဝေချမ်းလိုက်ခြင်းဟာ အရင်းကိုခွဲဝေပေးခြင်းနဲ့ အလုပ်လက်မဲပြသနာ အငတ်ပြတ်သနာကိုဖြေရှင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်လာစေပြီး အကြပ်တည်းကိုအသက်ရှု ချောင်စေမှာဖြစ်တယ်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ စက်မှု အဆင့်သင့်မဖြစ်သေးပဲလယ်ယာတွေကိုသိမ်းတာဟာ ကိုယ်သေတွင်းကိုကိုယ်တူးနေတာသာဖြစ်တယ်။ နိင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေတာသာဖြစ်တယ်။
လယ်ယာတွေ၊ ယာတွေ၊အိမ်တွေကို အစိုးရသိမ်းမယ်ဆိုရင် ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုး သို့ မဟုတ် ပေါက်ဈေးထက်ပိုပေးတာဟာ အစိုးရငွေတွေကို ပိုကုန်စေမှာလား လို့ မေးရင်တော့ .. မကုန်ဘူး လို့ ပြော
နိင်ပါတယ်။ ဥပမာ လယ်ပံတောင်းတောင်ကလယ်သမားတွေ ကိုဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတသိန်း နဲ့တသန်းကြားကိုလျောသင့်တယ်။ (လျောကြေးမလိုခြင်ဘူးဆိုရင်လဲ လယ်တွေကိုမူလပိုင်ရှင်ထံပြန်ပေးရမယ်။ )
၁. လယ်သမားတွေလဲကျေနပ်မယ်။ နိင်ငံရေးပြသနာပြေလည်သွားမယ်။
၂. လယ်သမားတွေလက်ထဲရောက်လာတဲ့ငွေက အရင်းတွေအဖြစ်နဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအသွင်ကူးပြောင်းလာစေနိင်တဲ့အတွက် ဈေးကွက် ထဲမှာလည်ပတ်တဲ့ငွေ အဖြစ်ရောက်လာမယ်။
လုပ်ငန်းသစ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်မှု၊ အလုပ်လက်မဲပြသနာနဲ့ ငွေကို ပိုသုံးစွဲလာတဲ့အတွက် ငွေလည်ပတ်မှုကောင်းလာစေတယ်။ ( Cash Flow ) တွေဖြစ်လာမယ်။
၃. ဒီငွေကိုရင်းနှီးလာတဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေက အစိုးရကနေအခွန်အဖြစ်ပြန်လည်ကောက်ယူလာနိင်တယ်။ အဓိပါယ်ကအစိုးရဘဏာက ဆိုက်ပြီး လျောကြေးပေးထားတာကတချိန်မှာ အစိုးရလက်ထဲကို ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။
မြေယာတိုက်ပွဲ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်နေပါပြီဆိုတာ ၀ါဒဖြန့် တာကများပြီ လက်တွေမှာပြသနာတွေရဲ့အရင်းကို ဖြေရှင်းဖုို့မကြိုးစားတာကိုတွေ့ ရတယ်။ ဒီထဲမှာလယ်ယာမြေပြသနာပါနေတယ်။ အေရာဝတီတိုင်းနဲ့ဆားလင်းကြီးမြို့ နယ်လယ်သမားတိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင် သူတို့ ဟာ ခရိုနီဖြစ်ခြင်လို့သမတဖြစ်ခြင်လို့ဆူပူနေကြတာမဟုတ်ပဲ အသက်၇ှင်ရပ်တည်ရေး ( Survival ) အတွက် အန္တရယ်ရှိတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရင်ဆိုင်လာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်တယ်။ဒီနေရာမှာ သရုပ်ခွဲစိတ်ပညာရှင်လဲဖြစ် ရွေးခြယ်မှုသီအိုရီ ( Choice Theory)ကိုဖေါ်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့
၀ီလီယံ ဂလေဆာက ‘’ We are driven by five genetic needs: Survival, love and belonging, power, freedom and fun’’ လိုဆိုတယ်။ လူတွေမှာ စေ့ဆော်ပေးတာက ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး ၊ အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်တာ၊ အာဏာ၊ လွတ်လပ်မှု နဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ လူသားတယောက်ဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးဟာ ဘ၀ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်ကြီးတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သူက ထောက်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာလယ်သမားတွေဟာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ တောင်ခက်ခဲလာတာကိုတွေ့ ရတယ်။ စစ်အုပ်စုတွေတဖွဲ့ ပြီးတဖွဲ့ တက်လာတယ်။ လယ်ယာမြေဖွင့်ဖြိုးမှုတွေကို လျစ်လျူရှု့ ခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကတော့
လယ်တွေကိုစွန့် ခွာတဖက်နိင်ငံ တွေ မှာ ပျံကျ အလုပ်သမားတွေအဖြစ်အသွင်းပြောင်းခဲ့တယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့မိသားစုက လယ်ယာမြေမှာဆက်လက်ပြီးရှင်သန်ရေးအတွက်ရုမ်းကန်ကြရတယ်။
လက်ပတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာကိုလယ်သမားတွေမယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲနှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးမှာအစိုးရရဘယ်စီမံကိန်းတွေကမှာလူထုအတွက် အကျိုးမရှိခဲ့လိုဖြစ်တယ်။ မဆလ၊န၀တ၊နအဖ ၊ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း လယ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀က မပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဆိုတာ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကသက်သေခံနေခဲ့လိုဖြစ်တယ်။
အခု အစီရင်ခံစာမှဖေါ်ပြထားသလို လယ်သမားတွေကိုနစ်နာကြေးပေးပါလို့ အကြံပြုထားတယ်။ ဒါကိုလယ်သမားတွေမယုံပါဘူး။ လျောကြေးက ဘယ်လောက်လဲ။ မစိုမပို့ လျောကြေးလေးကိုယူပြီးမြို့တက်ပြီးဘာလုပ်စားရမလဲ။ ဘယ်ဆွေမျိုးအိမ်တက်နေရမလဲ။ တည်ရှိနေပြီးသား သူတို့ ဘ၀တွေအားလုံး ပျက်စီးအောင်ဖျက်လိုက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ မြို့ကလူထုတွေကိုကိုယ်တိုင် ဆင်းရဲတွင်းထဲမှာယက်ကန်ယက်ကန်ဖြစ်နေကြတာသူတုို့ သိတယ်။ ဒါကြောင့်မကူညီခြင်နေပါမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ လို ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်။
We don't need lion, it is only for Zoo.
Useless guy without rule, discipline, regulation and respect human right though you are shouting for that.
Haveagood day, so called unfinished excel 88.
Remeber, myanmar is become democracy not because of 88 but becasue of myanmar national.